ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တခုအတွင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် တက်ရောက်လာသော လူထု တစိတ်တဒေသကို တွေ့မြင်ရသည့် မှတ်တမ်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
ဒီတပတ်မှာတော့ လယ်သမားတွေ တာဝန်ကျေ စပါးမပေးနိုင်လို့ အရေးယူခံရမှာ စိုးရိမ်ပြီး ဖြစ်သလို ဖြေရှင်းနေကြရာကနေ မြေယာမဲ့ဘဝတွေ ဖြစ်လာရတာကို ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာကသာ အကောင်းဆုံးနည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတွေကို ပထမပိုင်းနဲ့ ဒုတိယပိုင်းမှာ တင်ပြထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁) နားထောင်ရန်။
အပိုင်း (၂) နားထောင်ရန်။
ဥပဒေဟာ လူတန်းစားအားလုံးပေၞမြာ မခြဲူခားပဲ သက်ရောက်မြ ရြ္ဘိပီဆိုရင် အဲဒီ လူႛအဖြဲႚအစည်းဟာ ယဉ်ကေဵးတဲ့ လူႛအဖြဲႚအစည်းလိုႛ သတ်မြတိံိုင်ေုကာင်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ေူပာခဲ့ဖူးတဲ့စကားတေကြို ပထမပိုင်းနဲႛ ဒုတိယပိုင်း တင်ူပထားပၝတယ်။
တိုင်းူပည်ရဲ့ အဖိုးတန်ရတနာတြေ ူဖစ်တဲ့ အိုံပညာရြင်တြေ၊ တတ်သိပညာရြင်တေကြို လူတိုင်း လူတိုင်းက တတိံိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းဂုဏ်ူပဖြိုႛ၊ ကူညီစောင့်ရြောက်ုကဖိုႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ေူပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတေကြို တင်ူပထားပၝတယ်။
အဆင်းရဲိံိုင်ငံအူဖစ် ူမန်မာူပည် လ္တေွာက်ထားလိုက်ရတဲ့ အေူခအနေတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ေူပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတေကြို ပထမပိုင်း တင်ူပထားပၝတယ်။
အဆင်းရဲိံိုင်ငံအူဖစ် ူမန်မာူပည် လ္တေွာက်ထားလိုက်ရတဲ့ အေူခအနေတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ေူပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတေကြို နောက်ဆုံးပိုင်း တင်ူပထားပၝတယ်။
ိံိုင်ငံရေးတည်ူငိမ်မြ ရြိမရြိ ဆိုတာကို ဘယ်လို အခဵက်အလက်တေနြဲႛ တိုင်းတာရမြာလဲ ဆိုတာနဲႛ ဘာူဖစ်လိုႛ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေး မူဖစ်တာလဲ ဆိုတာတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ေူပာခဲ့ဘူးတဲ့ စကားတေကြို တင်ူပထားပၝတယ်။
ူမန်မာူပည်သူတြေ ဒီမိုကရေစီနဲႛ မထိုက်တန်သေးဘူးလိုႛ ေူပာတာကို မိမိအနေနဲႛ လက်မခံိံိုင်ေုကာင်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ေူပာခဲ့ဘူးတဲ့ စကားတေကြို ကိုနေရိန်ကေဵာ်က တင်ူပထားပၝတယ်။
‘လူထုဟာ အစိုးရအတြက်လား၊ အစိုးရဟာ လူထုအတြက်လား’ ဆိုတာကို မြန်မြန်ကန်ကန် ေူဖဖိုႛ လိုအပ်တဲ့အေုကာင်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ေူပာခဲ့ဘူးတဲ့စကားတေကြို တင်ူပထားပၝတယ်။
နေရပ်- Dawei (Tavoy)
Daw Aung San Su Kyi,I like every things what
you do and what you say
Dec 27, 2010 03:18 AM
Very remarkable and invaluable speeches. Great leader Daw Su. "Long live". Thanks RFA.